My Analytics: Google Analytics ho an'ny iPhone | Martech Zone
My Analytics: Google Analytics ho an'ny iPhone
Alarobia, Jolay 10, 2013 Douglas Karr
KISSmetrics dia namoaka fampiharana iPhone MAIMAIMPOANA antsoina hoe Ny Analytics. Io no fomba haingana indrindra hahitanao ny fahombiazan'ny metrikao Google Analytics rehefa lavitra ny latabatrao ianao.
Tany am-piandohan'ity taona ity, ireo olona ao amin'ny KISSmetrics dia nitady fampiharana Google Analytics mendrika hanampiana azy ireo hitazona tab eo amin'ny angon-drakitra manokana. Ary tsy nahita izy ireo. Na ny fampiharana finday dia FOMBA lalandava loatra ary tsy hamela anao hanao fampitahana, na nanandrana nanao WAY be loatra izy ireo ary tsy mora ampiasaina.
Ny Analytics mampiseho ny angona Google Analytics rehefa mandeha ianao, mandritra ny fivoriana, na mila fanavaozana haingana.
miaraka Ny Analytics, azonao atao ny mampitaha ny angon-drakitra anio sy ny omaly, ny andro tamin'ny herinandro lasa teo, ary ny andro mitovy amin'ny tapa-bolana lasa izay. Azonao atao koa ny mampitaha ny angona omaly sy ny herinandro teo aloha na ny angona amin'ity herinandro ity amin'ny herinandro teo aloha.
Ny Analytics manome anao ny angona ilainao avy hatrany. Hiditra haingana amin'ny fitsidihanao ianao, mpitsidika tsy manam-paharoa, fomba fijerin'ny pejy, tanjona, fifanakalozana ara-barotra sy fidiram-bolan'ny ecommerce.
Tags: Vola avy amin'ny ecommerceFifanakalozana ara-barotratanjonaGoogle Analyticsfampiharana finday google analyticsiOSiPhonepejy fahitanaMpitsidika tsy manam-paharoamitsidika
Ny tranga ho an'ny fanatsarana finday
Sep 20, 2013 amin'ny 3: 08 AM
Oay, heveriko fa fampiharana tena tsara ho an'ireo mila fanavaozana haingana ity.